MW CMC Oo Lakulmay Bulsho-waynta Godey - Cakaara News
MW CMC Oo Lakulmay Bulsho-waynta Godey
Godey (Cakaaranews) Khamiis, 8da September 2016. Madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo waftigii balaadhnaa ee uu hogaaminayay oo xalay uhoyday magaalada godey ayaa nasasho shaah oo muqaaxiyaha badhtamaha magaalada ah kadib saaka kulan layeeshay odayaasha, haweenka, dhalinyarada iyo dhamaan waxgaradka shacabka godey.
Gudoomiyaha gobolka shabeele mudane farxaan cabdi maajuun ayaana madasha kulankan kusoo dhaweeyay madaxwaynaha.
Hadaba madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa shacabka godey uga warbixiyey sooyaalkii waxqabad la’aaneed ee deegaanku soo maray iyo isbadalada horumarineed, nabadgelyo iyo maamul suuban ee wakhti gaaban gudihii uu deegaanku kutalaabsaday. Wuxuuna kubooriyay shacabka inay sii xoojiyaan dhanka tabcashada beeraha si waxsoosaarka dalka iyo deegaankuba kor ugu koco maadaama ay xukuumadu kuhawlan tahay diyaarinta dhul beereed balaadhan islamarkaana ay miisaaniyad badan galisay dhanka horumarinta waraabka iyadoo udanaynaysa inay bulshadu uga faaiidaysato tabaca beeraha.
Sidoo kale, madaxwaynaha ayaa kubooriyay shacabka magaalada godey inay iska ilaaliyaan argagixisada gabbaadka kadhiganaysa diinta islaamka sida: Al-itaxaad, Alqushaash, Daacish, Buku-xaaraam, shiicada iwm. Madaxwayne CMC ayaa intaa kudaray, in dhibaatada kali ah ee deegaanka maanta kajirta ay tahay saboolnimo fadhiid ah oo uu kadanbeeyo fikirka cidhiidhyanee mashaqaystenimada iyadoo uu deegaankeenu hodan kuyahay guud ahaan noocyada kaladuwan ee nimcada iyo khayraadka dabiiciga ah islamarkaana haysana labada shay ee dunida ugu qaalisan oo ah dhul dihin oo beerasho kali ah ubaahan iyo biyo. Wuxuuna shacabka kuladardaarmay inay kabaxaan fikirka madhalayska ah ee mashaqaystenimada oo loo guntado si shaqsi kasta shaqo uu ugu diyaargaroobi lahaa.
Dhanka kalana, bulshawaynta godey ayaa si wayn uga mahadcelisay booqashada madaxwaynaha iyo waftiga uu hogaaminayo iyagoo balanqaaday inay sii laba-jibaari doonaan dhanka waxsoosaarka beeraha islamarkaana ay fikirka mashaqaystenimada ah kabixi doonaan.
Kulankan ayaana kusoo dhamaaday jawi wanaagsan iyo fikir midaysan oo la iskula qaatay kor uqaadida waxsoosaarka dalaga
iyo kabixida fikirka cidhiidhyan ee maashaqaystenimada..